Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: မြို.ပေါ်မှာ ဗုံအသံကျယ်မလား? လူထုအသံကျယ်မလား?
၈၈၈၈ လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ. နီးကပ်လာတာနှင့် အမျှ ပြည်တွင်းမှာရှိသည့် ဘုန်းဘုန်းများ၊ကျောင်းသားများ၊နိုင်ငံရေးပါတီများ နှင့်အမြင်ကွဲ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များ၏လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပြည်ပမှာရှိသည့် အတိုက်အခံများ၏လုပ်ရှားမှုများကို စစ်အစိုးရတို.ကြောက်ရွ.ံနေပြန်ပြီ၊ (၈) ရက်နေ.၊(၈) လပိုင်းကျရင် စစ်အစိုးရ ကိုးကွယ်တဲ့ စိတ်ပုပ် တရုတ်ကွန်မြူနစ်တို.၏ အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲနဲ. လဲရက်ကြုံ၏။ မနေ.က ကြံ့ဖွတ်ရုံးတွင် ဗုံပေါက်ကွဲသွားသဖြင့် လူထုတွေရဲ.သာဓုခေါ်သံများသည် ယခု အချိန်အထိ ရန်ကုန်မှာ ကြားနေဆဲပါ။
လာမည့် ဂျူလိုင်လ (၇) ရက်နေ.ကျရင် (၄၆)ကြိမ်မြောက်မည့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံကို ဒိုင်နမိုက် ဗုံတွေနဲ.
ဖြိုချခဲ့သည့်နေ.ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တဆက်တည်မှာပင်၊ ဩဂုတ်လ (၈)ရက်နေ.၊ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်း၊ စက်တင်ဘာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်မှု၊စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်းရေး စသည့် နေ.ထူးနေ.မြတ်များ ရှိသောလပိုင်းများသည် စစ်အစိုးရအတွက် အိပ်မက်ဆိုးသော လများဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုတွေအတွက်တော့ တိုက်ပွဲဝင်ရာသီ၊အပြီးအောင်ပွဲခံသော လများဖြစ်ပါသည်။
အနှစ်နှဆယ်ပြည့်မည့် (၈၈၈၈) လုံးအရေးတော်ပုံကြီးသည် ဒို. ဆက်လျှောက်သွားမည့် တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကို ပြတ်ပြတ်သားသား သန္နိဌာန်းချ ပြီး တက်ညီလက်ညီဆက်လျှောက်သွားကြဖို. အရေးကြီးပါသည်၊ ဒီအချိန်ဟာ မြို.ပေါ်မှာ ဗုံအသံကျယ်မလား? လူအထုသံကျယ်မလား?` ဆိုသည့် မေးခွန်းကို အဖြေမှန်ပေးဖို.အချိန်တန်ပြီ။